Beesha caalamka oo war cad kasoo saartay talaabaddii ay qaadeen maamul goboleedyadda dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Beesha caalamka oo war cad kasoo saartay talaabaddii ay qaadeen maamul goboleedyadda dalka
Beesha Caalamka ayaa si wadajir ah usoo saaray war-qoraal ah oo ay uga hadlayaan talaabadda ay dhawaan qaadeen maamul goboleedyadda dalka, iyagoona dhinaca kale soo dhaweeyay go’aanka guddiga doorashada dadban ee heer federaal.
Qoraalkaasi oo ay si wadajir ah usoo saareen Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, IGAD, Midowga Afrika iyo dowladaha Maraykanka, Sweden iyo Talyaaniga ayaa waxay kaga hadleen talaabadda maamul goboleedyadda dalka Soomaaliya bishaan 8-deedii iyo 9-keedii kusoo gudbiyeen liiska xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka soo socda.
Waxaa sidoo kale qoraalkaasi lagu soo dhaweeyay go’aanka ay guddiga doorashadda dadban ee heerka federal ee dalka Soomaaliya ku dhowrayaan sharciga iyo balanqaadyadda ay hogaamiyayaasha Soomaalida sameeyeen.
Sidoo kale, beesha caalamka ayaa waxay soo dhaweeyeen talaabadda ay maamul gobaleedka Koonfur Galbeed kusoo dhameystireen koontadda haweenka ku leeyihiin Aqalka Sare ee baarlamaanka.
Dhinaca kale, waxay beesha caalamka si xoogan u taageereen guddiga doorashada dadban ee heerka federaal oo ay 48-ka saacadood ugu qabteen inay maamul gobaleedyadda Galmudug, Puntland iyo Jubbaland dib usoo dhameystiraan liiska xubnaha u matali doona Aqalka Sare, kuna saleeyaan jadwalka shaqo ee ay ku heshiiyeen madaxda madasha wadatashiga qaranka.
Ugu dambeyntii, beesha caalamka oo ka kooban hay’addo iyo dowlado taageero siiya Soomaaliya ayaa ka digay inaan dib u dhac kale lagu sameeynin jadwalka ay guddiga doorashooyinka dadban ee heerka federal ay u dejiyeen doorashooyinka Soomaaliya.